Famosaviana mpamosavy kely ho an'ny Halloween - Asa tanana mora | Asa tanana
Alicia tomero | | asa-tanana
Satroka tena tany am-boalohany mba hahafahanao manamboatra azy io any an-trano miaraka amin'ny fitaovana voalohany. Mora be ny manao azy ary toy ny mahafinaritra ny ankizy matetika. Mianara amin'ny dingana vitsivitsy vitsivitsy hananganana fomba hafa hanamboarana satroka ho an'ny akanjo mpamosavy.
Azonao atao ny mahita ny dingana tsikelikely amin'ity lesona ity amin'ity video manaraka ity:
1 Ireto no fitaovana nampiasako:
8 Dingana fahafito:
9 Dingana fahavalo:
10 Dingana fahasivy fahasivy:
Ireto no fitaovana nampiasako:
maitso mainty, maitso maivana ary fotsy fotsy
baoritra mainty, miaraka amina iray lehibe tonga hitsitsy
takelaka roa hanaovana ny modely
Andao hanao izany ny ambany satroka. Manisy marika amin'ny kompà izahay manodidina ny 30cm savaivony. Nanapaka ny faribolana hoy izahay ary manome marika roa hafa indray. Ny voalohany amin'ny 16cm savaivony ary ny faharoa ao anatiny, fa tafasaraka izy ireo 3cm.
Nanapaka izahay ny faribolana anatiny ary andao handeha manapaka hatrany amin'ny sisin'ny faribolana voasoratra. Ireo sosona ireo dia haporitra ka hopetahana amin'ny pompadour ambony.
Amin'ny sisa amin'ny baoritra dia hataontsika ny endrika conical ny satroka. Miaraka amin'ny fanampian'ny fitsipika apetrantsika eo amin'ny zoron'ny baoritra ny teboka aotra ary manao marika isika a 30cm miala ary isaky ny elanelam-potoana, dia toy izany no hanaovana ny endrika antsasaky ny faribolana. Notapahinay izy io.
Notapahiko ho toy ny boribory boribory ny zoro eo an-tampon'ilay endrika sôkôlika, na dia tsy voatery atao afa-tsy io, dia mba tsy dia maranitra ny tampon'ny satroka. Sambory izahay iray amin'ireo sisiny ny baoritra ary ampianay ny lakaoly, handeha hifikitra hoy farany ary handeha hanao ny endrik'ilay satroka.
Manintona tongotra iray amin'ny sahona izahay toy ny sarisary amin'ny taratasy. izany manapaka izahay ary ampiasainay ho maodely izy ireo hanamboarana ny ranjo roa amin'ny ravina fingotra eva. Nanapaka ireo sary ireo izahay ary nametraka azy.
Amin'ny pejy iray hafa dia manao sary hafa momba ny tarehy sahona. Ny antsasaky ny tarehy ihany no ataontsika mba hahafahana mamantatra ny ao anatiny ny antsasaky ny ravina ary mivoaka homogeneous izy io. Sambory izahay ny kisarisary, manapaka azy izahay ary mampiasa azy toy ny modely hahafahana manao ny endrik'ilay sahona amin'ny vovoka eva.
Manao sary izahay maso amin'ny taratasy, miverina manao sketch isika avy eo ary manadihady azy amin'ny rubber eva ary kihono. Izahay dia manao maso roa lehibe maintso sy ao anatiny dia hametraka maso fotsy roa hafa isika.
Hetezo ihany koa ny sasany mpianatra mainty. Amin'ity indray mitoraka ity dia hampiasa ny karatra mainty izahay. Izahay dia mametaka ny zava-drehetra amin'ny lakaoly karazana silikon.
Dingana fahasivy fahasivy:
Mifikitra izahay koa ny faritra roa amin'ny satroka. Hataontsika lakaoly koa ny ranjony sy ny tarehin'ny sahona. Avelao ho maina izy io ary afaka mankafy an'ity satroka voalohany ity isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Asa tanana » asa-tanana » Mpamosavy kely satroka ho an'ny Halloween
Mpamosavy niampita ny doormat - asa tanana halloween mora
Voninkazo tsara tarehy EVA